Ubuntu MATE 18.04 Beta 1 yeRaspberry Pi ikozvino yavapo | Linux Vakapindwa muropa
Anenge makore mana apfuura ini ndakawana Ubuntu MATE. Ndaneta nekuremerwa kweUbatana pane yangu yakangwara laptop, ndakatanga kuishandisa nekuda kwayo kuyerera uye nekuti yaitaridzika zvakanyanya senge yekutanga Linux nharaunda yandakabata. Uye, kunyangwe GNOME 4 yakavandudza Kubatana mune iyi pfungwa, ichiri shoma mvura kupfuura MATE. Mugadziri wayo, Martin Wimpress, anoziva izvi uye nekudaro anovandudza, pamusoro peiyo huru vhezheni, a vhezheni yeiyo Raspberry Pi.
Kune avo vasina kusvika parizvino, kuverenga chimwe chinhu chisiri Ubuntu 19.04 vhiki ino kunonzwika kunge kusanzwisisika. Uye ndizvo izvo Wimpress akakanda mangwanani ano ndi Ubuntu MATE 18.04 beta 1 yeRaspberry Pi, kuburitswa kwakaitika padivi peUbuntu MATE 19.04 Beta 1. Nei iyi vhezheni? Nekuti ndiyo yazvino LTS inowanikwa. Isu tinorangarira kuti yapfuura uye ichiri kutsigirwa ndeye Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus.
Chii chitsva muUbuntu MATE 18.04 beta 1 yeRaspberry Pi
Ubuntu kernel, inotsigirwa zvizere neako kernel uye ekuchengetedza zvikwata.
Otomatiki epamhepo faira system kuwedzera.
Tsigiro yeEthernet neWiFi (painowanikwa).
Tsigiro yeBluetooth (painowanikwa).
Audio inoburitsa kuburikidza ne3.5mm kana HDMI analog jack.
Kuwana GPIO kuburikidza neGPIO Zero, pigpio uye WiringPi.
Tsigiro yePython Mavhiri eRaspberry Pi.
USB bhutsu rutsigiro.
Mutyairi fbururbo yakaiswa nekusarudzika, kunyangwe ichiganhurirwa kune inokurumidza 2D hwindo.
VLC uye ffmpeg vane Hardware-inobatsira vhidhiyo encoding uye decoding.
Iyo yekuyedza VC4 mutyairi inogona kumisikidzwa kubva raspbi-config.
ONA: arm64 mifananidzo haina kusanganisira chero VideoCode IV Hardware kumhanyisa.
Iyo raspi-config chiteshi cheUbuntu yakaverengerwa nekutadza.
Steam Link inowanikwa yekumisikidza.
Minecraft Pi Edition inowanikwa yekumisikidza.
Ini pachangu, handina Raspberry Pi asi kubva pane zvese zvandakaverenga ndinofunga Ubuntu MATE iri pakati pesarudzo dzakanakisa dzekushandisa sisitimu yekushandisa pane ino inozivikanwa mamaboard. Iyo imwe sarudzo iyo zvakare yakakodzera kuongorora ndeye Raspan, Debian-based operating system iyo yakagadzirirwa chete uye chete neRaspberry mupfungwa. Ndeipi sisitimu yekushandisa yaunoshandisa kana yaungashandisa pane yako Raspberry Pi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Ubuntu MATE 18.04 Beta 1 yeRaspberry Pi inosvika neUbuntu kernel